WHO oo lagu dhaleeceeyay jawaabteeda Ebola - BBC News Somali
WHO oo lagu dhaleeceeyay jawaabteeda Ebola
Image caption Ka hortaga cudurka Ebola
Hay’adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, ayaa sheegeysa in ay baaritaan ku sameyneyso qaabka ay u wajahday xasarada ka dhalatay cudurka Ebola, balse aanay taa dhci doonin ilaa iyo inta laga xakameynayo faafida cudurka dilaaga ah.
Agaasimaha guud ee WHO ayaa wareysi ay siisay wakaalada wararka ee Bloomberg, waxa ay ku sheegtay in aanay ku faraxsaneyn in saddex bilood kaddib markii uu dilaacay cudurka ay koobaneyd waxa ay ka qabteen.
Dadka dhaliilaya WHO ayaa sheegaya in ay tahay hay’ad maamulkeedu iska dabalaab badan yahay, uuna aad u yar yahay xiriirka ay sameeyaan xafiisyadeeda Afrika iyo xarunteeda dhexe ee ku taalla Geneva.
Isabelle Nuttall, oo ah madaxa WHO u qaabilsan diyaargarowga caalamiga ah ayaa rumeysan in qaabka ay hay’addu uga jawaabtay Ebola baaritaan lagu sameyn doono.
WHO ayaa si la mid ah hay’adaha kale ee Qaramada Midoobay waxa haysta dhaqaalo yari. Waxaana macquul ah in hay’addu ay ka baqday in lagu eedeeyo ka badbadin haddii ay la boodi lahayd Ebola, si la mid ah sidii ay qeylo dhaanta uga sameysay hergabka doofaarka ee dilaacay 2009-kii, kaasoo dilay dad aad u tira yar.
Balse Ebola ayaa ah cudur ka halis badan hergabka doofaarka, waxaana ay tahay in laga jawaabo in WHO ay si wanaagsan u maareysay wax ka qabashada cudurkan dilaaga ah.
MSF oo weli qaadeysa culeyska Ebola
17 Oktoobar 2014
Obama: Waa in laga hortagaa Ebola
UN: 'dunidu way ku guul daraysatay xakamaynta Ebola'
15 Oktoobar 2014